Iphunga lidla ukutya okuthengelekayo, kwaye kwanokungabizi. Ingathengwa phantse kunanini na unyaka. Ingumthombo wemvelo wamavithamini kunye nezinto ezilandelelanayo. Ikhusela umzimba kwiintsholongwane kwaye iphucula isikhumba, iyakususa i-acne kunye ne-acne. Kukhona imaski ebusayo yokuguga kunye ne-pumpkin gruel. Ngoko kuyafaneleka ukugqiba ukuba ithanga liyinkokheli yomzimba womntu.
Iimpawu eziwusizo zeengxube
Ixesha elide i-pumpkin isetyenziselwa iinjongo zokuzilungisa. Uphuhlise inani lamagqabi kunye nokudibanisa kweoli yeengqimba. Iyeza zamasiko zisebenzisa i-pumpkin zombini kwifom eluhlaza kunye nokupheka. Ukusetyenziswa kwemifuno yemifuno, imbewu. Kungcono ukwenza ithanga elinesibini, ngoko ke ezinye izakhiwo ezinomsebenzi zihlala. Ukususela kwi-otvaratykvy uza kufumana i-conditioner enhle kakhulu yeenwele. Emva koko, iinwele ziya kukhanya kwaye zibalulekile.
Ikhungwane igcinwe ngokufanelekileyo ngexesha lokubanda, kwaye ngexesha elifanayo ligcina zonke izakhiwo ezincedo. Ngako oko, imifuno iyanconywa. Ebusika, ubuso bomntu wemveliso yemvelo akwenziwanga kakhulu. Kodwa kukho uphawu, apho uya kufumana i-porridge esityebileyo kunye ne-mask ewusizo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba umbane uqukethe i-carotene, i-potassium, i-magnesium kunye namavithamini B, i-C ne-E, i-PP. Ngako oko, imifuno isela nje incedo. Kwaye ngoku siphendukela kwinto ebaluleke kakhulu - ubuso bomaski.
I-mask egqibeleleyo yamehlo ebompu
Kule maski udinga i-teaspoon yobumba obuphuzi okanye obomvu, ukunyuka okunamandla kwe-chamomile, iipunipoli ezimbini zamapuphu ebilisiwe. Zonke izithako mazixutywe kwaye zibeke ubuso malunga nemizuzu engama-20. Isihlunu sesophu siya kususa nayiphi na isohlwayo. Yaye ukuba uyayisebenzisa kathathu ngeveki, iya kuphelisa iingxaki zesikhumba ngokusisigxina.
Inani elincinci lembewu ehlanjulweyo, i-spoonful honey, i-st. iipuni zobisi. Imbewu yempuphu iyayiluncedo kakhulu, njengokuba yinyama ngokwayo. Kufuneka babe yi-rastoloch ukuze bafeze. Emva koko wongeza ubusi uze udibanise yonke into nobisi. Smetannomassu agqoke ubuso bonke, ukuphepha ummandla ojikeleze amehlo. I-mask iyancipha kwaye izalise isikhumba nge-magnesium. Ingummangaliso omhle ngexesha lekwindla nobusika.
I-mask efanelekileyo yokunyusa isenziwa kwipulp ye-pumpkin, pureavocado kunye nobisi. Zonke izithako kufuneka zixutywe kakuhle kwaye zisetyenziswe ebusweni imizuzu eyi-15. Kwixesha elibandayo, nje umsindisi.
Mask kusuka kwi-acne
Thatha ujusi, i-pumpkin ephekiweyo kunye nokufakelwa kweti ehlaza. Ekubeni kunenani elikhulu le-zinc kuyo, lilwa ngokugqithiseleyo ngeempumpo. Zonke izithako kufuneka zixutywe kwaye zisetyenziswe kubuso obuhlambulukileyo. Emva kokuba imaski ihlanjwe, musa ukusebenzisa ukhilimu. Vumela isikhumba siphumle.
Mask ukusuka kumabala adala
Kwi-blender, kufuneka ugaye uhlambulule imbewu yeengqungquthela kwaye udibanise amanzi amaminerali kumgubo owenziwe phambi kokuba ukhilimu omuncu ukhanywe. Hlanganisa ubuso kwaye uhlambe emva kwemizuzu engama-20 ngamanzi afudumele. Le nkqubo inqweneleka ukuba yenziwe imihla ngemihla kwaye emva kwenyanga kuya kwenzeka ukuba ilahle amabala e-pigment.
Ukusebenza ngokugqibeleleyo imaski ye-pumpkin kunye ne-edema ecaleni kwamehlo. Yonke into idibanisa kakuhle kwaye ilala. Le compress isetyenziswe kwingingqi ecaleni kwamehlo. Gcina i-compressor imizuzu engama-20. Iyakususa ngokukhawuleza uketshezi oluninzi kwaye iyanciphisa ubuqhophololo. Ukujongana nezikhwama phantsi kwamehlo.
Mask for skin sensitive
Sithatha inyama yeengxube, zipheka kuphela. Emva koko i-oat flakes, ubusi kunye nohlaza oluhlaza. Ngenxa yoko, kukho umxube omhle. Kungcono ukongeza iiflethi kwenye ithanga, ngoko bancitshisa kancane. Kwi-gruel ekhulile kufuneka udibanise itiye. Faka isicelo semaski imizuzu engama-20.
Umaski ovela kumbundu omnyama phantsi kwamehlo
Xa kwakungenako ukulala ngokwaneleyo kusasa, ngoko iindidi ezinjalo phantsi kwamehlo, ukuba nokuba isiseko asincedi. Kwaye ngoku iinjongo zafika ekuhlanguleni. Thatha inyama ye-pulpy, i-juice ikhukhamba, ubisi kunye ne-fresh pumpkin juice. I-masochka iya kushiya inqeni elincinci. Ngako oko, kufuneka uthabathe iipotton kwaye uyenze umxube. Ngoku ulungele amehlo. Gcina malunga nemizuzu eyi-15-20.
Umaski wesikhumba esomileyo
Pheka ithanga uze ufumane i-gruel - iipunipoli ezimbini. Yongeza i-oyile yeoli. Imaski kufuneka igcinwe imizuzu engama-20. Iyanceda ngokukhawuleza isikhumba esomileyo kwaye inika amandla. Ngoku isikhumba asiyi kuhluthwa. Isixhobo esikhulu ekwindla.
Iqungu lekhumba elinobisi
Apha ufuna ijusi yetamatato kunye ne-pure ye-pumpkin. Hlanganisa zonke izithako kwaye usebenzise ubuso. Gcina imaski malunga nemizuzu engama-20, njengesiqhelo. Emva koko, uhlambe umaski, kufuneka ubeke ubuncinane obusweni ebusweni bakho, nje imizuzu emibini.
Isikhwama sephunga kwisikhumba esiqhelekileyo
Thatha i juisi, i-yogurt kunye ne-pulp encane. I-Takamaska ​​ivuselela isikhumba kwaye isondla ngezithako ezincedo. Faka isicelo semaski imizuzu eyi-15.
Ukuba uhlala usebenzisa ezo zokupheka zamaski, unokukhawuleza uqaphele ukuphucula okubonakalayo kwesikhumba sombuso. Ingakumbi ithanga lingasetyenziselwa nje ngokuba ngumzimba. Le mifuno yindawo yokugcina izinto ezifunwa ngumntu. Ubuncwane esawulibala.
Imihla ngemihla kaDisemba ukunyamekela ubuso kwi-Kiehls kunye no-Estee Lauder
Ukutshatyalaliswa kwasekuseni: yenza isandla esinamandla sokuhlamba ubuso bakho
Yintoni engatshintsha inyama kwindawo yokutya?
Vera iCold: enye, kodwa inzondo ebuthayo
Ukuthintela ukunyanzela kwiSatifikethi sokuFundela kwizikolo eziprayimari ezi-4
Biography kaArmen Dzhigarkhanyan
Ulwalamano olukhululekile kwiibini